Shaqaalaha dalka Mareykanka oo xitaa kirada guryaha "aan iska bixin karin" - BBC News Somali
Shaqaalaha dalka Mareykanka oo xitaa kirada guryaha "aan iska bixin karin"
23 Febraayo 2020
Waa lamaane Mareykan ah oo shaqeeya balse aan awoodin in ay cunno helaan.
Corin Kealoha iyo Shaun Karagory, waa nin iyo xaaskiisa. Labaduba waxay haystaan shaqo, balse marnaba ma awoodaan in ay nolashooda maareeyaan oo xitaa cunno ma heli karaan. Sidaa awgeed, waxay ku nool yihiin raashinka ay ka soo qaataan goobaha lagu quudiyo dadka saboolka ahi.
"Xitaa ma maareyn karayno nolashayada oo waxa aan mushaar ahaan u qaadanno kuma filna nolashayada," ayuu yiri Corin oo 46 sano jir ah isla markaana ka shaqeeyo qeybta soo dhaweynta ee hoteel ku yaal magaalada Reno ee gobolka Nevada ee dalkaasi Mareykanka.
Lamaanahani waxay raashin u raadsadaan xarunta St Vincent's Food Pantry ee lagu quudiyo dadka saboolka ahi, halkaasi oo ay ka helaan cunno sida rooti, caano iyo xitaa hilib.
Xaaladdooda nolaleed ayaa astaan u ah wajiga kale ee xaqiiqada madaxweyne Trump ee ah in Mareykanku uu dhaqaale ahaan aad u soo kabsaday muddadii uu madaxweynaha ahaa.
Trump ayaa horraantii sanadkan sheegay in dhaqaalaha Mareykanka uu soo kabsaday, waxa uuna yiri: "Shaqooyinku waa kuwo joogta ah, waxaa sidoo kale kordhay dhakhliga dadka, waxaa meesha ka sii baxayso saboolnimadii baahsanayd iyo sanaddadii dhaqaale kuduudsiga."
Hadalkaasi ayaa ah mid uu rajeynayo in uu ka caawin doono in mar kale uu ku guuleysto madaxtinnimada dalkiisa, gaar ahaan in uu cod ka helo gobolka Nevada, oo sanadkii 2016 aad looga codeeyay Hillary Clinton.
Ganacsiga guryaha ee gobolkani ayaa haatan xoogaa soo kabsaday tan iyo sanadkii 2008-dii, xilligaasi oo dalku uu guud ahaan galay dhaqaale kuduudsi ba'an.
Balse si aad u ogaatid heerka soo kabashada, waxaad u baahan tahay oo kaliya in aad eegtid dariiqyada ku yaal bartamaha magaalada Reno.
Tusaale ahaan, waddada North Virginia Street, waxaad ku arkeysaa dabaqyo aad u dhaadheer iyo hoteello casri ah iyo dad dalxiiseyaal ah oo sawirro ku qaadanaya Reno Arch oo ah halka ugu caansan magaaladaasi, waxaana halkan aad ku arkeysaa dad ladan.
Balse haddii aad eegtid dhanka kale, gaar ahaan waddada East Fourth Street, xaaladdu sidaa waa ay ka duwan tahay oo waxaad arkeysaa maqaaxiyo yar yar iyo dad dawirsanaya ama safaf ugu jira goobaha dadka lagu quudiyo.
Inta badan dadkani ma ahan kuwa darbi jiifta ahi balse waxaa ku jira oo waliba u badan dad shaqeeya balse waayuhu ka hiilliyay.
"Waxaa halkan noogu yimaada qiyaastii 350 ilaa 450 qoys oo cusub bil kastaa," ayuu yiri Carlos Carrillo, oo ah madaxa barnaamijka cunno qeybinta ee xarunta St Vincent's food pantry.
"Waayadii hore waxaa inoo imaan jiray dad badan oo shaqo la'aan ay haysato balse in dhawaale waxaa inoo imaanayay dad u badan shaqaale balse nolashu ay ku adag tahay."
Raashinka halkan lagu qeybiyo waxaa ka mid ah tan la siiyo Eeyaha iyo bisadaha, waxaana qiyaastii raashinka noocaasi ah halkani qaato bil kastaa qoysas gaaraya ilaa 1,500 oo qoys - waana astaan muujinaysa in mararka qaar qoysaskani ay gaajo ku seexdaan si ay u quudiyaan xayawaanaadka guri joogta ahi ee ay haystaan.
Inta badan dadka ku tiirsan raashinka laga qeybiyo xaruntan ayaa waxay sheegayaan in nolashii ay ku adkaatay oo xitaa ay iska bixin la'yihiin ijaarka guryaha oo haatan aad qaali ugu ah.
Gobolka Nevada ayaa dadka saboolka ah iyo kuwa dakhligooda uu yar yahay waxaa ku haysta dhibaato dhanka guryaha ahi, sida ay sheegtay koox u dhaqdhaqaaqda arrimaha dadka dan yarta ahi.
Dadka deggan magaaladan Reno ayaa sare kaca ku yimid qiimaha kirada guryaha ku eedeynaya dadka hawlgabka ah iyo shaqaalaha shirkadaha tiknoolajiyada ee ka soo guuraya gobolka deriska ah ee California, oo xudduud la leh Nevada iyo sidoo kale dhismaha guryaha oo aad ugu yar magaaladan.
Corin iyo Shaun ayaa ka mid ah dadka ay arrintaasi saameynta ku yeelatay. Shaun oo 39 sano jir ah, ayaa ka shaqeyn jirtay shirkad dhanka ammaanka ah, waxaana markii dambe ku dhacay xanuun ku khasbay in ay shaqada isaga tagto.
"Hooy la'aan ayaan noqonnay sababtoo ah waxaan iska bixin weynay kirada guriga aan deggannahay," ayuu yiri Corin. "Ugu dambeyn waxaan miciin bidnay gaarigayaga oo aan hooy ka dhigannay."
Corin iyo Shaun, waxay haatan saacaddiiba ku shaqeeyaan toban doolar balse kirada guriga ay haatan deggan yihiin ayaa ah 900 oo doolar bishiiba, taa oo ka dhigan in wixii ay shaqeytaan ay inta badan ku bixiyaan kirada guriga.
"Wali xaaladdayadu ma ahan mid deggan - oo xitaa ma hubno xaaladda aan wajihi doono mustaqbalka," ayuu yiri Corin oo dhoolla caddeynaya. "hadda maalin waliba si baan u nool nahay."
Jim Eaglesmith waxa uu muddo afar sano ah daryeelayay hooyadii oo xanuunsan, waxaana markii dambe ku dhacday shaqo la'aan maadaama uu wakhtigiisa inta badan ku bixinayay daryeelka hooyadii.
"Kharashaadka ku baxaya kirada guriga, cunnada, caafimadka ayaa fuuqsaday dhammaan wixii dhaqaale ahaa ee aan haystay… saddexdii sano ee la soo dhaafay, waxaan dhameysannay wixii lacag ahaa u yiilay hooyadey iyo 401,000 oo doolar oo aan anigu keydsaday. Wixii aan haysannay oo dhan waan dhameysannay," ayuu yiri.
Intaa ka dib waxa uu sheegay in muddo laba bilood ah ahaayeen hooy la'aan, waxa uuna la seexanayay saaxibbadii. Markii dambe wuxuu u guuray tuulo ay ku yaalliin guryo loogu tala galay dadka dan yarta ahi, waxa uuna kiro ahaan u bixyaa bishiiba 400 oo doolar.
Daryeelka caafimaad ayaa aad qaali uga ah gudaha Mareykanka, taana waxay ka dhigan tahay in dadka saboolka ahi iyo dan yartuba aysan u sahlanayn in ay helaan daryeel caafimaad.
Riyada ah in qof kastaa oo Mareykan ah uu helo guri uu leeyahay ayaa haatan u muuqata mid aan marnaba suurtagal ahayn, maadaama dad badan oo ay ku jiraan kuwo shaqeeya aysan haatan awoodin in ay guryo iibsadaan.
Kirada guryaha oo qaali ah iyo kharashka badan ee ku baxaya caafimaadka ayaa halis gelinaya nolasha dadka dakhligoodu yar yahay ee ku nool dalkaasi Mareykanka.
Angel Mcceig-Escalanti oo 44 sano jir ah ayaa sheegeysa in dakhliga soo gala qoyskeeda intiisa badan lagu bixyo ijaarka guriga ay deggan yihiin.
"Nooma aysan suurtagelin in gebi ahaanba aan lacag dhiganno, nolasha ayaan la daalaa dhaceynaa.
Angel iyo seygeeda waxaa la nool hooyadeed iyo cannug ay dhashay, waxa ayna deggan yihiin guri laba qol ka kooban oo kiradiisu tahay 1,270 oo doolar bishiiba. Sidaa awgeed, midkood ayaa waxa uu ku seexdaa kuraasta taalla qolka fadhiga.
Angel ayaa gargaar iyo kaalmo u raadsata xarunta St Vincent's Food Pantry iyo xarumo kale ee laga qeybiyo raashinak, si ay u quudiso qoyskeeda.
Warbaahinta iyo siyaasiinta Mareykanka uma kala soocna soo kabashada dhaqaale ee dalka iyo xaaladda adag ee ay wajahayaan qoysaska saboolka ah.
Dadka shaqaalaha u badan ee dalkaasi ayaan isu arkin in ay sabool yihiin balse intooda badan waxaa ku adag nolasha oo ma awoodaan in xitaa ay iska bixiyaan kirada guryaha ay deggan yihiin.
Arbacadii la soo dhaafay ayaa dood dhex martay musharrixiinta xisbiga Dimuquraadiga ee Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg iyo Amy Klobuchar, waxay dhammaan ballan qaad u sameeyeen dadka shaqeeya, waxayna soo hadal qaadeen arrimo ay ka mid yihiin in shaqaalaha mushaarka loo kordhiyo.
Balse marka ay timaado codbixinta, qof waliba waxa uu leeyahay go'aankiisa oo uu u madax bannaan yahay, waxaase jirta in siyaasiintu ay codadka dadka dabaqadda dhexee ee shaqaalaha u badan u arkaan kuwo ay mar waliba ku xisaabtamaan.
Dayax gacmeedka Zhurong ee Shiinaha oo sawirro bilic leh ka soo diray Mars